Dambudziko idzva reApple Watch kupemberera Zuva reVakadzi reMarudzi Ose | Ndinobva mac
Dambudziko idzva reApple Watch kupemberera Zuva reVakadzi reMarudzi
Musi waKurume 8, International Women's Day inopembererwa, zuva iro Apple yatove nedambudziko nyowani ratakagadzirirwa, dambudziko idzva iro Apple rinoda kuenderera naro kutikurudzira kuti tiwedzere kushingaira uye icho chave chinetso chaicho kune vazhinji vashandisi, mumwe wavo watinoshanda naye Jordi.
Kuti tikunde chinetso chinotevera, Apple inoita kuti zvive nyore kwazvo kwatiri, nekuti isu tinongofanirwa kufamba kiromita imwe chete, mujaho kana wewiricheya kudzidziswa munaKurume 8. Kamwe kwapera, yakakosha chiitiko logo ichavhurwa muapp. Iri dambudziko ichave ichiwanikwa kune wese munhu.
Dambudziko iri rinomiririra rechipiri reZuva reVakadzi reNyika Dzose, kubvira Apple ichatanga kuiisa mumatambudziko eApple Watch. Mushure mechinguva chidiki, matambudziko akadzokera kuApple Watch ne chiitiko chine chekuita nemwedzi wemoyo.
Kana zviitiko zvezviitiko zvakapfuura chiri chinhu chekutarisa, kupedzisa dambudziko iri kunofanirwa zvakare kuvhura chaiwo masitikita anogona kushandiswakupa hurukuro dzako kubata mumamessage uye FaceTime vhidhiyo mafoni.
Kunze kwekutemha kufamba kwavo, kumhanya, kana kudzidziswa newiricheya muHutano app, vashandisi vanogona kukanda chinhambwe chavo uye kudzidziswa mukati chero yechitatu-bato reOSOS app sync data pamwe neApple's Health app.
Mumazuva anotevera isu tichagamuchira chiziviso pane yedu Apple Watch Iko kunodiwa zvinodiwa kucharatidzwa kuti uwane iyo menduru nyowani inoenderana nedambudziko rinopemberera Zuva reVakadzi reMarudzi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Dambudziko idzva reApple Watch kupemberera Zuva reVakadzi reMarudzi
Podcast 10x21: Kupeta mobiles, Apple's umpteenth kutadza
Zvimwe zvinoda kuziva kubva paMacOS Mojave yekumba skrini